ငါရေးထားတာကိုမင်းဖတ်မယ် Martech Zone
ကျွန်ုပ်၏စီအီးအိုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဝက်ဘ်ဆိုက်အသစ်ကိုစတင်မိတ်ဆက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမိတ္တူထုတ်ရန်အချိန်ပိုင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုကိုငှားရမ်းထားသည်။ ငှားရမ်းထားသူတွင်ခိုင်မာသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနောက်ခံရှိသော်လည်း ၀ က်ဘ်စျေးကွက်နောက်ခံရှိသည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအလွယ်တကူကောက်ယူနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်စိတ်ချသည် (ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်!) ။
လမ်းညွှန်မှုတချို့ပေးဖို့၊ အကြောင်းအရာတွေကိုရေးသားရာမှာကြီးမားတဲ့အရင်းအမြစ်တွေနဲ့ copywriter ကိုငါပေးထားတယ်။ အရင်းအမြစ်တစ်ခုမှာ Junta42 ၏ထိပ်တန်းအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘလော့ဂ်များဖြစ်သည်။ ငါစာရင်းထဲတွင်ဘလော့ဂ်များအားလုံးထုတ်စစ်ဆေးကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်ငါတွေ့သောကြောင့်ယုံကြည်မှုအချို့ရှိပါတယ် ကော်ဖီ အဲဒီမှာ! ငါမကြာမီအခြားဆိုဒ်များကိုလေ့လာပါလိမ့်မယ်။
သင်၏ဆိုက် (သို့) ဘလော့ဂ်အတွက်ကူးရေးရန်အတွက်သိကောင်းစရာများ -
နောက်ထပ် ado မရှိရင်, copywriting များအတွက်ထိပ်တန်းအကြံပေးချက်များကိုဒီမှာ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်များအားလုံးတွင်ဤအရာများကိုအသုံးမပြုရန်ကျွန်ုပ်အပြစ်ရှိကြောင်းဖော်ပြခြင်းဖြင့်စတင်သင့်သည်။ မင်းထက်ငါပိုကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမင်းလုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ မင်း လိမ့်မည် အကျိုးကျေးဇူးများကိုရိတ်သိမ်း!
ခေါင်းစဉ်များဖမ်းယူ - သတင်းစာနှင့်မတူသောခေါင်းစီးများရွေးချယ်ခြင်း၊ စာဖတ်သူများကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်များမှတစ်ဆင့်ကူးယူခြင်းနှင့် RSS feeds များကိုဖြတ်တောက်ခြင်းတို့ကြောင့်စာဖတ်သူများစိတ် ၀ င်စားသည်။
အကြောင်းအရာ Chunking - whitespace ကငါတို့သူငယ်ချင်းပါ။ သင်၏ကော်ပီကိုဖတ်ရှုနိုင်စေရန် (သို့) လွယ်ကူစွာဖတ်ရှုရန်…ကောလိပ်တွင်သင်ရေးသားခဲ့သောသင်ခန်းစာများကိုရှောင်ပါ။ အဲဒီအစား၊ အားကောင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်ဒါမှမဟုတ်ခေါင်းစဉ်ငယ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။ နောက်စာပိုဒ် ၁၊ ၂ ကအရမ်းပြင်းတဲ့ဝါကျတွေပါ။ ကျည်ဆံသို့မဟုတ်ရေတွက်စာရင်းအသုံးပြုပါ။
လစ်ဘရယ်ချိတ်ဆက်ပါ - အသွားအလာကိုမောင်းနှင်မည့်သော့ချက်စာလုံးများကို အသုံးပြု၍ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆောင်းပါးများကိုပြည်တွင်း၌ချိတ်ဆက်ပါ။ အပြင်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတစ်နေ့တာမှာသင့်ကိုပြန်ပေးနိုင်မယ့်အခြားဘလော့ဂ်တွေကိုမြှင့်တင်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရည်ညွှန်းချက်ကိုပိုမိုအားကောင်းစေပြီးသင်၏ site ကို visitors ည့်သည်များအားကြာရှည်စွာထားရန်ကူညီသည်။ အခြားဘလော့ဂ်များကိုလည်းမြှင့်တင်ပေးသည် - သင်၏ပရိသတ်ကိုသူတို့နှင့်ထိတွေ့စေခြင်း
သော့ချက်စာလုံးများနှင့်သော့ချက်များကိုသုံးပါ - ၀ က်ဘ်ပေါ်တွင်လူများရှာဖွေနေသည့်အရာများကိုနားလည်ခြင်းသည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှမည်သို့ရှာဖွေမည်ကိုနားလည်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ သင်၏အကြောင်းအရာတစ်လျှောက်လုံးသော့ချက်စာလုံးများနှင့်သော့ချက်စကားစုများကိုအသုံးပြုခြင်းကထိုအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွင်းသို့မောင်းနှင်ရန်နှင့်သင်ဖြည့်စွက်ထားသည့်အရာကိုရှာဖွေနေသည့်လူများအားသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာသို့ခေါ်ဆောင်လာစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။
စာမျက်နှာတိုင်းသည်ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာဖြစ်သည် - ၀ က်ဘ်စျေးကွက်သမားများက landing စာမျက်နှာများအကြောင်းပြောဆိုလေ့ရှိပြီး၎င်းတို့ကိုအီးမေးလ် (သို့) မြှင့်တင်ရေးမှ direct ည့်သည်အားမည်သည့်နေရာတွင် ဦး တည်နေသည်ကိုအားနည်းစွာဖော်ထုတ်သည်။ သို့သော်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာ (သို့) ဘလော့ဂ်များအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များဖြင့်တစ် ဦး ချင်းစီရည်ညွှန်းထားသောကြောင့်၎င်းသည်သီးခြားစီရည်ညွှန်းထားသောစာမျက်နှာတိုင်းသည်ဆင်းသက်လာသောစာမျက်နှာဖြစ်လာသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ထိုအရာကစာမျက်နှာတိုင်းကိုစာဖတ်သူအရင်ကသင့်ဆိုဒ်သို့တစ်ခါမှမရောက်ဖူးသလိုဆက်ဆံရန်အရေးကြီးသည်။ အထူးသဖြင့်ဘလော့ဂ်တစ်ခုနှင့်အတူ! ကျွန်ုပ်၏ new ည့်သည်သစ်များ၏ ၁၀% အောက်သာလျှင်ကျွန်ုပ်၏ပင်မစာမျက်နှာမှတဆင့်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကိုဝင်ရောက်သည်။
မနှစ်ကငါရေးခဲ့တယ် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက်ရေးသားခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ။ စာဖတ်သူတွေကိုပိတ်ပစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့အတွက်ပဲသင့်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုရေးသားတာကိုတားဆီးနိုင်ခဲ့တယ်။ ငါ post ကိုနားမှာရပ်; သို့သော်၊ သင်သည်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုရေးသောအခါချိန်ခွင်လျှာရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။
Tags: adကြော်ငြာbanner ကြော်ငြာခရစ္စမတ်ဒီဇိုင်းကြော်ငြာgoogle webmaster များက်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက် optimizationwebsite ကို optimizationဝဘ်ဆိုက်စီစဉ်ခြင်း
Twitter ပေါ်တွင် Snitter ဖြင့်တွစ်တာလုပ်စဉ်။
27:2008 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 10, 51